Ukufa Kwangaphambi kwesikhathi Kokukhangisa Okuphumayo | Martech Zone
NgoLwesine, Januwari 30, 2014 Douglas Karr
I-SBA ilinganisela ukuthi amabhizinisi omqashi amasha angama-600,000 afakwa minyaka yonke. Ababaningi babo abazuzayo ngegama lomkhiqizo njenge-IBM noma iCoca Cola. Ukuze baphile kufanele bazingele ibhizinisi elisha.
Ngisho nezinkampani ezinkulu ezinjenge-EMC, iCisco neHewlett Packard zinamaqembu amakhulu azinikele ekufuneni amabhizinisi amasha kuzo zombili izisekelo zawo ezifakiwe kanye namakhasimende amasha angahle abe khona. Ngaphandle kwenqubo yokuhlwaya kanye nenqubo yokulinganisa ehambisanayo, konke kuyenzela bona, okungakaze kusebenze njengenqubo esebenzisa ulwazi lweqembu ukwenza wonke umzamo wokufuna phambili ube ngcono ngayo yonke imisebenzi yokuthengisa.
The marketing kwangaphakathi umkhakha uzenzela phansi uma bezibeka njengenye indlela engabizi kakhulu kwezentengiso ephumayo. Okuhlangenwe nakho kwethu namakhasimende kubonise kaninginingi ukuthi ukuhlanganiswa kwalokhu kuqinisa ngakunye.
Ukuba nempumelelo Isu lokukhangisa elingavamile ingahlinzeka ngokubeka uphawu ngomkhiqizo othuthukisiwe futhi yakhe ukuthembana, ukubonakala kanye negunya lenkampani. Ingabutha abahola abazoba khona kulo lonke usesho nakwabasebenzelana nomphakathi, iqoqe idatha yokuziphatha kubo, futhi inikeze iqembu lakho eliphumayo ukuhola abakuqonda kangcono ngesikhathi lapho ithemba libheke ukuthenga.
Ukuba nempumelelo isu lokukhangisa eliphumayo isheshisa isu lakho elingenayo ngokunikela ngokuthinta komuntu uqobo ekuholeni okungenayo. Umele abathengisi abaphumayo angakha ubudlelwano nalokho okulindelwe, abafundise, futhi aphendule ngempumelelo kunoma iziphi iziphikiso ezingaba khona.
Ukumaketha okuphumayo kunezinzuzo eziningi… kungakhiqizwa kabusha kalula, kuvulwe futhi kuvaliwe, noma kukhuphuke futhi kwehle ukulawula ukufunwa. Yize kungadinga utshalomali oluphakeme, imiphumela kufanele ibikezelwe, isheshe futhi ibe muhle.
Engeza platform yokumaketha yokuzenzekelayo njengabaxhasi bethu Ngakwesokudla ku-Interactive, a Isixazululo sokuphathwa kwesiphakamiso like I-TinderBox (futhi nabaxhasi bethu), futhi ungakhuphula ukusebenza kahle kwemizamo yakho ephumayo kakhulu… ukunciphisa isikhathi iqembu lakho eliphumayo elisichitha ekwenzeni imisebenzi yokuphatha. Ukuvunyelwa kokuthengisa kuvala igebe lokusebenza kahle lapho kuhlangana okuphumayo nokuphumayo.
Tags: marketing kwangaphakathiukumaketha okungaphandleUkunika Amandla Ukuthengisa
Feb 2, 2014 ngo-4: 45 PM
Ukumaketha okuphumayo kwaba ukuthi ngakha kanjani ibhizinisi lami kwasekuqaleni, futhi sengisize nochwepheshe abaningi bezezimali ukuthi bakhe namabhizinisi abo. Hhayi ukushaya nje, kepha uthumela amaphakheji wokukhuphula wangokwezifiso Kuyasebenza futhi kusebenza kahle kimi nakwezinye izinkulungwane zabanye. Kuyiqiniso ngokwanele, kukhona umsebenzi omningi obandakanyekayo, kepha inhlanganisela yokuphuma okwenziwe ngekilasi kanye nokungenayo kochwepheshe kusebenza kahle kumabhizinisi amaningi.
Feb 2, 2014 ngo-5: 56 PM
Kuvunyelwene @stephenwanderson: disqus!
Feb 17, 2014 ngo-6: 55 PM
Kuyahlekisa nokho, ukuthi leli su lithola kanjani i-PR eningi embi, lapho lingasebenza kahle kakhulu.
Feb 5, 2014 ngo-6: 16 PM
Iphuzu elihle impela uDoug! Imisebenzi engenayo uma ufika phambi kwabantu abazi ukuthi banenkinga. Kepha abantu abaningi abazi ukuthi banenkinga baze babone enye indlela eya esimweni samanje. Yilokho okuphumayo okwenzela khona. Ebhizinisini lethu, i-Facebook iyindlela emangalisayo yokwenza ukumaketha okuphumayo. Nge-FB singakhomba kalula abantu abangaba abangani bamakhasimende ethu akhona noma abantu ababelana ngezimpawu zamakhasimende ethu akhona.
Okuthunyelwe okuhle nokuqonda.